Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Pop!_OS - LinuxCapable
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Pop!_OS
October 29, 2021 by Jọshụa James
Na-agbanwe gaa na mgbọrọgwụ (su)
Mepụta na Akaụntụ onye ọrụ na Pop!_OS
Tinye onye ọrụ ọhụrụ na otu Sudoers na Pop!_OS
Mgbe ị wụnye Pop!_OS, Akaụntụ onye ọrụ emepụtara n'oge mbido mbụ nwere ikike sudo. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe mkpa ịgbakwunye ndị ọrụ sudo ma ọ bụ wepu ohere ahụ. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ yana iwu ole na ole.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta tinye onye ọrụ na otu sudoers na sistemụ Pop!_OS ọ bụla dị ugbu a.
OS akwadoro: Pop ọ bụla dị ugbu a!_OS
Akaụntụ onye ọrụ: ohere mgbọrọgwụ
Melite gi Pop! _OS sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị kwalitere ruo ugbu a:
Iji mepụta ndị ọrụ sudo ọhụrụ, ị ga-achọ ịgbanwe na mgbọrọgwụ site na iji su iwu. Site na ndabara, akaụntụ mgbọrọgwụ enweghị ntọala paswọọdụ, yabụ ị ga-achọ ịtọ nke a tupu ịga n'ihu na-eji iwu a:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịmụta ka esi etinye akaụntụ njirimara ọhụrụ. Dị ka o kwesịrị, ị nwere ike ịnye ikike na akaụntụ dị adị, mana ị ga-amụta ịgbakwunye onye ọrụ site na ọkọ maka nkuzi.
Mbụ, mepụta akaụntụ onye ọrụ , dochie ihe atụ na aha njirimara nke ịchọrọ ịgbakwunye.
Mgbe pịchara iwu a wee pịa igodo ntinye, ngwa ngwa ga-apụta maka paswọọdụ onye ọrụ ọhụrụ wee chọọ ka ị kwado ya. Cheta, maka onye ọ bụla nwere ohere sudoers, ekwesịrị iji paswọọdụ siri ike nwere mkpụrụedemede ukwu, obere mkpụrụedemede, akara, uru ọnụọgụ na mkpụrụedemede pụrụ iche.
Na mgbakwunye, a ga-akpali gị maka ozi ndị ọzọ gbasara aha njirimara ị na-agbakwunye. Dejupụta nkọwa dị ka o kwere mee, ma ị nwere ike ịgafe nkọwa ma ọ bụrụ na-amasị gị site na ịpị Tinye igodo.
Ozugbo emechara, pịnye "Y” wee pịa ya "Tinye igodo" aga n'ihu.
Gosi na agbakwunyela onye ọrụ site n'ịgba iwu a:
Ọ dị mma ịlele ma etinyere aha njirimara na nke ọma na otu sudoers. Iji mee nke a, gbaa ọsọ nyere n'iwu:
A ga-akpali gị pịnye aha njirimara sudo ị na-eji yana paswọọdụ ya. Ozugbo ịbanye na nkwenye, ị ga-ahụ mmepụta na-esonụ:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ Pop!_OS gị wee tinye ikike sudo. N'ozuzu, nkuzi a kwesịrị ịrụ ọrụ maka ụdị niile akwadoro ma akwadoro naanị inye ikike nye ndị ọrụ tụkwasịrị obi ka ha ga-enweta faịlụ nwere mmetụta na ikike nke sudo nyere.
Categories Pop! _OS Tags Sudoers Mail igodo
Otu esi etinye Tor Browser na openSUSE Leap 15